Crown Media မိသားစုကွန်ယက်များသည် Quantum Stor နှင့်အတူဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုပြောင်းလဲ5ပလက်ဖောင်းနှင့် Lattus အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှု | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုမီဒီယာမိသားစု Quantum StorNext5ပလက်ဖောင်းနှင့် Lattus Object ကိုသိုလှောင်အတူကွန်ယက်ေူပာင်းလဲရေးကိုဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာ
c3 ကြိုတင်နှင့်အတူ VSCOcam နှင့်အတူလုပ်ငန်းများ၌
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ ဇန်နဝါရီလ 21, 2016 - ကွမ်တမ် ကော်ပိုရေးရှင်း (NYSE: QTM) ယနေ့သရဖူမီဒီယာမိသားစုကွန်ယက်ကချမှတ်အားဖြင့် high-resolution ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲလမ်းကိုအသွင်ပြောင်းထားပြီးကြေညာခဲ့သည် ကွမ်တမ်'' s ကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာ-optimized သိုလှောင်မှု။ အမာခံ Channel ကို၏အကြီးဆုံးအမေရိကန်မိသားစု-oriented အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့်မိဘကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ, သရဖူမီဒီယာမှလှည့် ကွမ်တမ် နှင့်ပေါင်းစည်းမီဒီယာနည်းပညာများ (IMT), ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ပြုလုပ်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးတောင်းဆိုချက်များကိုအတူတက်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီရန်။ IMT architected နှင့်ဖြန့်ချထား ကွမ်တမ် StorNext5လိုအပ်သကဲ့သို့, ထိုသူတို့ကိုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါအောင်အနေဖြင့်အလိုအလျှောက်ကုမ္ပဏီ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကာကွယ်ပေးသည်တစ်ခုမြင့်မားအရွယ်မှာအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ပေး, သိုလှောင်မှုပစ္စည်းနှင့် Lattus (R) အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုစနစ်အမျှဝေပေးတယ်။
၎င်း၏ယခင်သိုလှောင်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံလက်အောက်တွင်သရဖူမီဒီယာတည်းဖြတ်ရေးများအတွက်အွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းမှုသို့ဖိုင်တွေမျိုချမိပါနဲ့သူတို့မရှိတော့တက်ကြွခဲ့ကြသည့်အခါတစ်ဦးတိပ် archive ကိုမှသူတို့ကိုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ repurposing သို့မဟုတ် rebroadcast များအတွက်အကြောင်းအရာလိုအပ်တဲ့အခါထို့နောက်ကတိပ် archive ကိုထဲကဗီဒီယိုဖိုင်များဆွဲထုတ်မယ်လို့ပြန်အွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းမှုကြောင့်စင်ပေါ်ကို။ သရဖူမီဒီယာကပိုအလုပ်အပေါ်ကိုယူသကဲ့သို့, သို့သော်ဒီလုပ်ငန်းအသွားအလာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်လာခဲ့သည်။
"ဤမျှလောက်ပိုပြီးသစ်ကိုအကြောင်းအရာအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအဆိုပါရောဂါပိုးမျိုးကျနော်တို့အစဉ်မပြတ်ဝင်ရောက်ဖို့ခက်နှင့်လည်းကျနော်တို့သင့်အဖြစ်အကြောင်းအရာကာကွယ်မပေးခဲ့ပိုကြီးတဲ့တိပ်မော်ကွန်းတိုက်စီမံခန့်ခွဲသစ်အွန်လိုင်း disk ကိုသိုလှောင်မှုကိုဝယ်ယူခဲ့ဓိပ်ပာ," ရွိုင်းဘန်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာကဆိုသည် သရဖူမီဒီယာမှာ။ "IMT သိသိသာသာမိမိတို့၏မီဒီယာ Workflows တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားကုမ္ပဏီများကကူညီပေးခဲ့ဖူးကြောင်းသိမှတ်ကြလော့ကျနော်တို့အဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေကျွန်တော်တို့ကိုကူညီသူတို့ကိုစေ့စပ်။ "
IMT လျင်မြန်စွာအကျိုးကျေးဇူးများအသိအမှတ်ပြု ကွမ်တမ် ကုမ္ပဏီ၏ယခင် Xsan အွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းမှုကွန်ယက် StorNext ရဲ့ပြီးပြည့်စုံလိုက်ဖက်တဲ့အပေါ်အခြေခံပြီးသရဖူမီဒီယာရဲ့လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပေးနိုင်ဘူး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, StorNext (R) IMT ကအခြားဖောက်သည်က်ဘ်ဆိုက်များမှာလုပ်သောများထားရှိထံမှထူးခြားသောအားသာချက်များကိုမယ်လို့မသိဘူးသော Lattus အတူစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စပ်ရာမရှိသောပေါင်းစည်းမှုပူဇော်ကြ၏။
Lattus အကြောင်းအရာ petabytes ရာပေါင်းများစွာမှတက်ကိုင်လျက်, ပထဝီဖြန့်ဖြူးမှတဆင့်ရိုးရာ RAID Array ကိုထက်ပိုမိုအရွယ်မှာနှင့်ပိုပြီးဒဏ်ခံနှစ်ဦးစလုံးသော Self-သည်အနာပျောက်စေသောပတ်ဝန်းကျင်ပေးနိုငျကွောငျးကိုတိုးချဲ့အွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းမှု repositories ကဖန်တီးရန်အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုနည်းပညာကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ၏အကြားအဆိုပါသရဖူမီဒီယာ Lattus configuration ကိုပြန့်ပွားအကြောင်းအရာ Los Angeles မြို့ ဌာနချုပ်နဲ့ Denver အနီးတစ်စက္ကန့် site ကို။ ကဆက်ပြောသည်ခံနိုင်ရည်အဘို့, ကုမ္ပဏီ New York မှာတတိယနေရာတွင်တစ်ဦးအပိုဆောင်း controller ကိုရှိပါတယ်။
မော်ကွန်းနှင့်အလွယ်တကူသုံးခွင့်ဒါဟာ Keeping နေချိန်မှာအကြောင်းအရာကာကွယ်ခြင်း
အဆိုပါ ကွမ်တမ် ဖြေရှင်းချက်သုံးစွဲနဲ့ content transcode ဒါပေမယ့်လည်း Lattus မှချက်ချင်းကြောင့်ကူးယူပြီးအဖြစ်မကြာမီပြုလုပ်စနစ်သို့ဆောင်ခဲ့သည်ကိုအဖြစ်ကယ်လီဖိုးနီးယားကနေကော်လိုရာဒိုကပုံတူပွားဖို့ရန်မသာသရဖူမီဒီယာ enabled သိရသည်။
"ရလဒ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာမတိုင်မီခဲ့ထက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတာအဆင့်မြင့်အရ," ဘန်းကရှင်းပြသည်။ "လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး, လုပ်ငန်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိုင်တီယောက်ျားတွေအပေါ်ဝန်လျော့နည်းစေသည့်အလိုအလျောက်ဖြစ်တော်မူ၏ ဒါဟာလုံးဝသီးခြား backup လုပ်ထားလုပ်ငန်းစဉ်၏ overhead နှင့်နှောင့်နှေးရှင်းလင်းစေပါတယ်။ "
အကြောင်းအရာမဟုတ်တော့တက်ကြွစွာအသုံးပြုနေပါသည်လိုက်တဲ့အခါရောအင်ဂျင်အပြင်အဆိုပါ StorNext ဖိုင်စနစ်နှင့်အဆင့်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအကြောင်းအရာအယ်ဒီတာများ access ကိုပေးဆက်နေစဉ်, StorNext Lattus အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုမှအွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းမှုကနေလှုံ့ဆော်ပေး။ ဤသည်စွမ်းရည်၏ petabytes မှ scales နှင့်ဖိုင်များအပြည့်အဝမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူပေါင်းစည်းသောပွင့်လင်းနီးပါးချက်ချင်းဖြစ်စဉ်ကိုပြန်လည်ရယူခြင်းစေသည်တစ်ခုတိုးချဲ့အွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူသရဖူမီဒီယာပေးပါသည်။
"ကျနော်တို့စာသားနေ့တိုင်း archive ကိုထဲကဒေတာများကိုအကြောင်းအရာဆွဲထုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကငါတို့အဘို့အအရေးကြီးပါတယ်," ဘန်းဆက်ပြောသည်။ "Plus အား, ငါတို့ရောအင်ဂျင်ကတဆင့်အရာအားလုံးတွေ့မြင်ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်လုပ်ငန်းအသွားအလာပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများတစ်ခုတည်းမှတ်ရှိသည်။ "
အဆိုပါချမှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်မှာပြန်ကြည့် ကွမ်တမ် ဖြေရှင်းချက်ဘန်းသူနဲ့သူ့အဖွဲ့ကမူလကအဲဒါကိုသို့ကြီးထွားဖို့နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲလိုထင်ကပြောကြားသည်။ ကြောင်းတိဖြစ်သက်သေပြသော်လည်း, ကံကောင်းထောက်မစွာ, Lattus ၏ကြီးမားသောအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကိုအလွယ်တကူသရဖူမီဒီယာရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်နေရာချပေးခဲ့ပါသည်။
"တစ်ဦးကတစ်နှစ်အကြာမှာတော့ကျွန်တော် Lattus တွင်သိမ်းထားသောအကြောင်းအရာ၏ပမာဏနှစ်ဆ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်နေနှင့်ကျွန်တော်မပါဘဲအသေကောင်ဖြစ်င့် - ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး," ဘန်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ "ဒီ ကွမ်တမ် ဖြေရှင်းချက်ပေးပို့နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်တည်းဖြတ်ရန်စားသုံးမိရာမှ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "
"သရဖူမီဒီယာနဲ့တူ Customer များ ပို. ပို. RAID နှင့် LTO တိပ်ကျော်လွန်သိုလှောင်မှု options များတောင်းခံနေကြတယ်" ဟုဂျေဆန် Kranitz, IMT မှာရောင်းအား၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားသည်။ "ဒီလှည့်ကွက်ဖြေရှင်းချက်လက်ရှိလုပ်ငန်းအသွားအလာသို့ချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ StorNext နှင့်အတူ, သရဖူမီဒီယာကိုအလွယ်တကူယနေ့အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုအားသာချက်ယူ Lattus လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဒါပေမယ့်လည်းအနာဂတ်အတွက်အခြားနည်းပညာများကို add ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်, မြားအပါအဝငျနိုငျသညျမသာ ကွမ်တမ်'' s ကိုမေး-တိမ်တိုက် (R) cloud storage ။ "
https://ကွမ်တမ်.box.com / CrownMediaPhotography
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: အကြောင်းအရာ output ကိုတစ်ဦးချွန်ထက်တိုးရင်ဆိုင်ခြင်း, သရဖူမီဒီယာမိသားစုကွန်ယက်ဟာရှေးခယျြခဲ့ ကွမ်တမ် StorNext နှင့် ကွမ်တမ် လုပ်ငန်းအသွားအလာဒေတာကိုစီမံခန့်ခွဲရန် Lattus ဖြေရှင်းနည်းများ။
Crown Media ၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းအသေးစိတ်အတွက် www: www ။ကွမ်တမ်.com / customerstories / crownmedia / index.aspx ။
ကွမ်တမ် လုပ်ငန်းအသွားအလာသိမ်းဆည်းခြင်း, archive ကိုများနှင့်ဒေတာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ StorNext5ပလက်ဖောင်းအင်အားကြီးခေတ်မီ high-performance ကို Workflows, ချောမွေ့စွာ, Real-time ပူးပေါင်းဖွင့်နှင့်အနာဂတ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြန်လည်ငွေရှာခြင်းအတွက်အလွယ်တကူလက်လှမ်းအကြောင်းအရာစောင့်ရှောက်ခြင်း။ 100,000 ဖောက်သည်ကိုးစားပြီထက်ပို ကွမ်တမ် ထိပ်တန်းစတူဒီယိုအဓိကထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းအကြောင်းအရာဖန်တီးသူအပါအဝင်သူတို့ရဲ့အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများအကြောင်းအရာလုပ်ငန်းအသွားအလာလိုအပ်ချက်, ဖြေရှင်းရန်။ နှင့် ကွမ်တမ်ဖောက်သည်သူတို့ပြီးတဆင့်နဲ့ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ရေရှည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သို့စားသုံးမိရာမှပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သည့်အဆုံးမှအဆုံးသို့သိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်းများ (TM) အချို့သော Be နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်မှာကြည့်ရှုပါ www.stornext.com.
ကွမ်တမ်, အ ကွမ်တမ် လိုဂို, အချို့သော Be, Lattus, Q-Cloud နှင့် StorNext မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ဖြစ်စေများမှာ ကွမ်တမ် Corporation နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများ၌၎င်း၏ affiliates ။ အားလုံးသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။
"ကို Safe ဆိပ်ကမ်း" ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်: ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက် "ရှေ့ဆက်-looking" ထုတ်ပြန်ချက်များပါရှိသည်။ သမိုင်းအချက်ကိုထုတ်ပြန်ချက်များထက်အခြားအားလုံးထုတ်ပြန်ချက်များရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များယူဆနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်များဖြစ်ကြသည်။ အထူးသ, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, 1 သက်ဆိုင်သောထုတ်ပြန်ချက်များ) အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်တန်ဖိုးဖောက်သည်အသုံးပြုခြင်းမှ ကွမ်တမ်အဘို့ 's StorNext ကရိယာများနှင့် Lattus စနစ်များနှင့် 2) ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားနှင့် ကွမ်တမ်'' s ကိုထိုကဲ့သို့သောကရိယာများနှင့်စနစ်များအနေဖြင့်အနာဂတ်ဝင်ငွေဟာကို Safe ဆိပ်ကမ်း၏အဓိပ္ပါယ်ကိုအတွင်းရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအားလုံးရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များမှမရရှိနိုင်ပါသတင်းအချက်အလက်အပေါ်အခြေခံထားပါသည် ကွမ်တမ် ရက်စွဲ hereof ပေါ်မှာ။ ဤရွေ့ကားထုတ်ပြန်ချက်များလူသိများနှင့်အမည်မသိအန္တရာယ်များ, မသေချာမရေရာမှုများနှင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခြားအချက်များပါဝင်ပတ်သက်နေ ကွမ်တမ်'' ့ရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များအားဖြင့်ဆိုလိုသူတွေကိုထံမှရုပ်ပစ္စည်းကွဲပြားဖို့အမှန်တကယ်ရလဒ်များကို။ ဤအစွန့်စားမှုအကြောင်းရင်းများထဲမှာထွက်သတ်မှတ်ထားကြသည်အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များ ကွမ်တမ်'' s ကိုကန့်သတ်ထားအပါအဝင်, ဒါပေမယ့်မ Securities and Exchange Commission နှင့်အတူသည် Periodic FILE, ဆိုတဲ့အပိုင်းစာရင်းဝင်သောသူတို့ကိုအန္တရာယ်များနှင့်မသေချာမရေရာ "အန္တရာယ်အချက်များ," အတွက် ကွမ်တမ်'' s ကို Form ကို 10-မေးပေါ်လပတ်အစီရင်ခံစာနိုဝင်ဘာ 6, 2015 ပေါ်နှင့်အတွင်း Securities and Exchange Commission နှင့်အတူတင်သွင်း ကွမ်တမ်'' s ကို Form ကို 10-K သည်ရက်နေ့တွင်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာဇွန်လ 12, 2015 အပေါ် Securities and Exchange Commission နှင့်အတူတင်သွင်း။ ကွမ်တမ် ဖော်ပြသက်ဆိုင်သောဥပဒေဖြင့်လိုအပ်သည့်အဖြစ် မှလွဲ. ကို update သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပစ်သည်၎င်း၏ရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များအသစ်အချက်အလက်များ၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်စေ, အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုတာဝန် disclaims ။
[အကြံပြု tweet: သရဖူမီဒီယာ, @HallmarkChannel ၏မိဘ, ပြည့်စုံလုပ်ငန်းအသွားအလာအဆင့်မြှင့်များအတွက် @QuantumCorp Lattus နှင့် @StorNext ပေါင်းစပ် qntm.co/1UUHqnn%5D
ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုမီဒီယာ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော ကွမ်တမ် StorNext 2016-01-25
ယခင်: ကွက်ကိုအဆိုတော်ဗားရှင်း7Now ကိုရရှိနိုင်
နောက်တစ်ခု: ဟင်းလျာများ HD ကိုအာရှသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' HEVC Compression ကိုအဖြေရှာခြင်းအားဖြင့် Powered ပထမ Worldwide မှအားလုံး-HEVC DTH ဝန်ဆောင်မှု, လွှတ်တင်